53 badmaax ayaa loo maleynayaa inay dhinteen ka dib markii la helay markab quusiyey badda Indonesia - Wardeeq 24 TV 53 badmaax ayaa loo maleynayaa inay dhinteen ka dib markii la helay markab quusiyey badda Indonesia Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka 53 badmaax ayaa loo maleynayaa inay dhinteen ka dib markii la helay...
53 badmaax ayaa loo maleynayaa inay dhinteen ka dib markii la helay markab quusiyey badda Indonesia
Saraakiisha Indooniisiya ayaa sheegay in qashin ka yimid markab quusta oo la waayey la helay ka dib markabka oo degay iyada oo rajadii badbaadinta 53 badmaaxiintii saarneyd ay yaraatay Sabtidii.
Waxyaabaha yaallay waxaa ka mid ahaa dhalo saliid leh iyo qalab ilaalinaya toorto, ayuu yiri Air Marshall Hadi Tjahjanto.
Qoysaska badmaaxiinta reer Indooniisiya ee rajo ka qaba maadama ay oksijiin hoosaadyadu dhammaadaan
Rajooyin ayaa u libdhay shaqaalihii badda ee Indonesia markii oksijiintii yaraatay
Isagoo wajahaya ‘mooraal jab’, Indooniisiya waxay kor u qaadeysaa raadinta badda gujiskeeda
Markab gujis ah oo laga leeyahay dalka Indooniisiya oo ay saarnaayeen 53 qof ayaa lawaayay waqooyiga magaalada Bali
“Waxyaabaha laga helay meel u dhow goobtii ugu dambaysay ee gujiska badda waxa la rumaysan yahay inay yihiin qaybo ka mid ah gujiska badda,” ayuu yidhi. Waxyaabahani waligood kama soo bixi lahaayeen markabka gumaadka ah ilaa cadaadis jiro mooyee. ”
Gujis-hoosaadka badda – oo ka mid ahaa shan ka mid ah doonyaha dagaalka ee Indonesia – ayaa la waayey Arbacadii intii lagu gudajiray layliyo toos ah oo loo yaqaan ‘torpedo tababar’ oo ka dhacayey jasiiradda fasaxa ee Indonesia ee Bali.
Taliyaha ciidamada badda Yudo Margono ayaa sheegay sabtidii in samatabbixiyeyaashu ay heleen waxyaabo badan, oo ay ku jiraan qaybo ka mid ah toosiyaha tooska, dhalo dufan oo la rumeysan yahay in loo isticmaalay in lagu saliideeyo periscope, iyo roogagga lagu tukado ee markabka gujiska ah.
“Cadeymaha dhabta ah ee aan helnay ee la rumeysan yahay inay ka yimaadeen gujis-hoosaadka, waxaan hada ka gudubnay waji-hoosaadkii waagii hore waxaanse u gudubnay hoos,” ayay tiri Margono.
Indooniisiya waxay mar sii horeysay u aragtay markab gujiskii Bali ka baaba’ay oo kaliya la la’yahay. Laakiin hadda saraakiishu waxay caddeeyeen inuu quusay badda hoosteeda.
Masuuliyiintu waxay sheegeen in aysan u badnayn in qarax uu ka dhacay markabka gujiska ah, Al Jazeera’s Jessica Washington ayaa ka soo werisay caasimada Indonesia ee Jakarta.
“Dhacdadaas [qarax], waxay maqli lahaayeen illaa hadda marxaladdan,” ayay tiri, iyadoo raacisay in mas’uuliyiintu ay wali baarayaan fursadaha daad-gureynta caafimaad.
Previous articleWasiir Kuxigeenka Gaashaandhigga “Dowlad quwad ciidan ayay ku taagan tahay”
Next articleIsraa’iil ayaa weeraro ku qaadeysa Gaza oo go’doonsan ka dib gantaallo la soo riday